Accueil > Gazetin'ny nosy > Ampamarinana: Olona 7 maty nianjeran’ny vatobe
Ampamarinana: Olona 7 maty nianjeran’ny vatobe
Tranga iray nanamarika an’iny faran’ny herinandro iny ny loza mahatsiravina izay niseho teny Ambanin’Ampamarinana, ny sabotsy alina lasa teo. Vatobe iray milanja an-jatony taonina no nianjery tamina trano maromaro ka olona 7 no namoy ny ainy ary 8 hafa ihany koa no naratra mafy tsaboina eny amin’ny hopitaly. Tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany teo ho eo no nianjera ity vatobe ity, tao anatin’ireny oram-be nikija teto Andrenivohitra ireny. Mazava ho azy moa fa tsy nisy nana-po na inona na inona ireo olona mipetraka eo amin’ilay tanàna nianjeran’io vatobe io fa rehefa nitranga ny loza ny taitra daholo ny iray tanàna. Fotoana fohy monja tao aorian’izay dia tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina, ny polisy avy amin’ny boriboritany faha 5 sy ny faharoa, ny avy eo anivon’ny BC etsy Anosy ary ny ny «Compagnie Urbaine d’Intervention», ireto farany izay niara-nisalahy tamin’ny fikarohana ireo razana. Ny sabotsy alina ihany dia efa nisy ny razana hita, saingy nisy kosa ireo efa alahady maraina vao voasikotra tao ambanin’ilay vato. Marihana fa ny 5 amin’ireo olona 7 fito maty ireo no ankizy, 11 taona ny zokiny indrindra raha 3 taona kosa ny zandriny indrindra. Efa-mianaka izay nipetraka tao anatin’ny iray tamin’ireo trano maromaro nianjeran’ity vato ity no niara-maty tao anatin’izao loza mahatsiravina izao. Nentina avy hatrany teny amin’ny hopitaly HJRA ireo olona 8 hafa naratra mafy. Betsaka amin’ireto naratra ireto no ankizy ary saika mpihavana daholo. Raha ny fitantaran’ireo olona nijoro vavolombelona teny amin’iny Ambanin’
Ampamarinana iny dia nisy varatra nilatsaka teo amin’ilay vatobe ka segondra vitsy tao aorian’izay no nianjera. Raha ny resaka nataon’ny olona sasany teny an-toerana ihany dia efa ela no natahorana hihotsaka io vato io saingy tsy nisy mihintsy na dia kely aza ny fandraisana andraikitra avy amin’ireo manam-pahefana. Amin’ny lafiny iray dia azo ambara ho tompon’andraikitra amin’izao loza mahatsiravina izao koa ny kaominina Antananarivo Renivohitra satria raha fantatra dia faritra tsy azo hanorenana trano eo amin’ity toerana nitrangan’ny loza ity. Midika izany fa tsy nandray ny andraikiny araka ny tokony ho izy ny kaominina matoa mbola betsaka ireo olona nanorina trano teo amin’io faritra io. Omaly no nidina ifotony nijery ny zava-misy teny an-toerana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana , nankahery ny fianakavian’ireo niaram-boina. Ireo razana 7 kosa rehefa avy teny amin’ny hopitaly HJRA dia nentina ao amin’ny INFP Mahamasina.
Ambondromisotra: Notafihin’ny dahalo 100 lahy indray
Omaly alahady faha 18 febroary 2018 tokony tamin’ny 11 ora maraina dia notafihin’ny dahalo marobe indray ny kaominina ao Ambondromisotra ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana ao amin’ny faritra Amoron’i Mania. Omby 100 mahery no lasan’ny dahalo ireto tamin’izany. Miisa 80 na 100 izy ireo raha ny tombatomban’ny fokonolona nanatrika. Zandary sy miaramila 12 lahy koa no avy hatrany no tonga namonjy ireto fokonolona izay mitaraina mafy ireto. Ombin’olona maromaro tamin’ny tananan’i Tsiefa sy ny manodidina azy no lasibatra amin’izao asan-dahalo izao. Koa satria misy ny fikambanan’ny tantsaha izay mifampiaro ao anatin’ny dina izay isan’ny matanjaka ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana azon’ny dahalo izao indray. Nanomboka tamin’ny 11 ora maraina ka hatramin’ny hariva tamin’ny 6 ora, izay mbola nifandraisana tamin’ny fokonolona tany an-toerana dia mbola raikitra ny fifanenjehana ataon’ny vahoaka sy ireto dahalo ireto. Misy aman-jatony koa ny fokonolona izay miady amin’ny dahalo ity amin’izao fotoana izao raha ny loharanom-baovao hatrany. Tsy mitovy nefa ny hery satria basy kalaky sy “mas36” no ampiasain’ireo dahalo ka tsy afaka tena miady ireto vahoaka ireto sy ny miaramila ary ny zandary. Ireto dahalo koa toa ireo miaramila efa voaofana ka sarotra ny tena hifanandrina aminy. Miantso vonjy amin’ny fanjakana mahefa tanteraka ny mponina any amin’ity toerana ity amin’izao fotoana izao. Ity no fanafihana faha roa lehibe nataon’ny dahalo tao Ambondromisotra tao anatin’ny roa volana izao. Mbola tsy fantatra ny maratra sy ny maty hatramin’ny fotoana nifandraisanay tamin’izy ireo omaly.
Marihina fa mbola mamely mafy ny asan-dahalo ao amin’ny faritra amoron’i Mania amin’izao fotoana izao. Isan’ny voa mafy koa ny ao Manandriana. Ity karazan’ny dahalo ity no antsoin’ny mponina any an-toerana hoe “dahalom-panjakana” satria sady manana fitaovana ary fomba toa ny an’ny miaramila sy zandary ary koa tsy vitsy fa hatramin’ny 80 noho miakatra no andiany iray. Ireo ilay dahalo tsy mety lany bala mihitsy. Ny tena mahagaga hoy ny mpanaraka ny raharaha any an-toerana dia ny maha very tsy hita ireo omby ireo nefa dia andiany maro no alain’ny dahalo indray maka.